Olympus PEN E-PL9: Mwepụta gọọmentị na United States | Akụkọ akụrụngwa
Edere Esteban | | Foto, Noticias
Ọnwa ole na ole gara aga ka anyị gwara gị banyere igwefoto Olympus ọhụrụ. Nke a bụ oghere Olympus PEN E-PL9. Igwe foto dị iche iche kwụpụta maka atụmatụ ha ochie na ndekọ 4K, n'etiti ụfọdụ n'ime ọrụ ya. I nwere ike ịgụtakwu banyere igwefoto ndị a ebe a. Ọ bụ ihe atụ nke ka mma n'akụkụ ụfọdụ na nke gara aga na usoro.
Mana, n'oge ahụ ekwughi ihe ọ bụla gbasara mgbanye igwefoto ndị a nke ụwa. A na-atụ anya na Olympus PEN E-PL9 ga-abata na Europe na March. Ọ bụ ezie na ọ nweghị ihe doro anya mara maka ịhapụ ya na America. N’ikpeazụ oge ahụ eruola.
Ọ bụ a igwefoto na e advertised site na mmalite dị ka otu nhọrọ maka ndị ọrụ na-eji ama ha wepụta ese foto ma chọọ ịkwaga na ọkachamara ọzọ. Igwefoto a bụ ezigbo nhọrọ maka ya. Ọ bụ n'ihi na ọ na-apụ apụ maka ịdị mfe nke iji ya.
Anyị nwere ọnọdụ akpaka, ọ na-ewe iji selfies, ọ nwere BluetoothN'ikpeazụ, e nwere ọtụtụ atụmatụ nke Olympus PEN E-PL9 nke na-eme ka ọ bụrụ nhọrọ dị mma maka ụdị ndị ọrụ a. Ugbu a, ọ mechara kụọ ahịa US.
Na mbu, ụlọ ọrụ ahụ kwuru na Olympus PEN E-PL9 ga-abata na mba ahụ n'ọnwa Machị, ikekwe mbubreyo. Ma nkwuputa a abiaghi na odighi ihe ekwuru banyere ya. Ihe kpalitere ajụjụ ole na ole gbasara ya. N’agbanyeghi n’ikpeazụ, ka oge na-aga izu ole na ole, ha erutela ụlọ ahịa. Yabụ ndị ọrụ na United States nwere ike iji ya mee ya.
N'ihe banyere ọnụahịa, a ga-enwe ụzọ abụọ ị ga - esi họrọ. Olympus PEN E-PL9 naanị ya ga-akwụ ụgwọ na $ 599,99. Ọ bụ ezie na ngwugwu nke gụnyere igwefoto, kaadị 16GB SD, ikpe na lens nwere ọnụ 699,99 dollar.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Ndi Olympus PEN E-PL9 rutere na United States
Autopilot nke Tesla na-aga n'ihu na-ada n'otu ebe ahụ nke ihe mberede ahụ na-akpata ọnwụ [Video]